Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo khudbad Ku saabsan horumarka Soomaaliya ka jeediyey jaamacadda London-Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo khudbad Ku saabsan horumarka Soomaaliya ka jeediyey jaamacadda London-Sawirro
21st May 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya mudane Cabdisalaan Cumar Hadliye, ayaa khudbad dheer oo ka hadlaysa horumarka Soomaaliya ka jeediyey machadka dhaqaalaha ee magaalada London LSE, iyo Jaamacada London qeybteeda Africa ee magaceeda loosoo gaabiyo SOAS.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay qaar kamida ardayda Soomaaliyeed ee waxkabarta Jaamacada magaalada London, diblomaasiyiin iyo dadwayne kale oo danaynayey inay wax ka ogaadaan xaalada dalka Soomaaliya.
Wasiir Hadliye, ayaa dhinacyo badan ka taabtay horumarka iyo dib-u-dhiska balaadhan ee Soomaaliya ay ku talaabsanaysay mudooyinkii u dambeyeeyey “Soomaaliya waxay in badan caalamka ka taagnayd meel koone ah hada waxaa muuqatay inay kusoo darsantay caalamka kale, Soomaaliya waxay horumar balaadhan ka samysay dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaadasa dibada, waxaanay 20 sano kadib yeelatay saaxiibo ay kamid yihiin wadamada ugu xooga badan caalamka”.
Gabogabadii kulamadan ayaa wasiirka waxaa su’aalo laga weydiiyey xaaladaha kala duwan ee ka jira dalka, iyo qorshaha dawlada ee wakhtiga dhow, isagoo wasiirkii uga jawaabay dhammaan dadkii su’aalaha la weydiiyey.
Baladweyne: dagaal xilligaan ka socda magaalada iyo Fatahaadii wabiga oo sii xoogeysatay.
Ethiopia’s Grand Dam Well on its Way to Completion